#nihongosoumatomen2kotoba N2 @ Japanese Language မွနျမာ 日本語 (facebook group) | Hla Hla Htay's Notes
#nihongosoumatomen2kotoba N2 @ Japanese Language မွနျမာ 日本語 (facebook group)	July 25, 2017
Filed under: Uncategorized — hhh123 @ 3:52 pm
These are collected from #nihongosoumatomen2kotoba posted by 優花‎ @ Japanese Language မွနျမာ 日本語 (facebook group) https://web.facebook.com/groups/766915153368643/
Somatome N2 vocat တစ်အုပ်လုံးမြန်မာဘာသာပြန်link တွေပါ။
လေ့လာနေရင်းနဲ့ တစ်ရက်စာ တစ်ရက် ရေးပြီးတင်ရတာမို့ အမှားပါနေရင် ပြင်ပေးပါဦးလို့။ PDF file ကတော့ မလုပ်သေးဘူး။ အမှားပြန်စစ်ပြီး အမှားကင်းပြီးဆုိုတော့မှာ file ထပ်တင်ပေးပါမယ်။
（１）賃貸アパート ちんたいアパート　အငှားတုိုက်ခန်း
（２）駅徒歩５分 えきとほ５ふん ရထားဘူတာကနေခြေကျင်ငါးမိနစ်
（３）敷金 しききん စပေါ်ငွေ
（４）礼金 れいきん ကျေးဇူးတင်ငွေ(အိမ်ငှားလျှင်အိမ်ရှင်ကုိုသီးသန့်ပေးရငွေ)
（５）管理費 かんりひ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ
（６）南向き 南向き တောင်ဘက်မျက်နှာမူ
（７）ベランダ　べらんだ ၀ရန်တာ
（９）真ん前 まんまえ ရှေ့တည့်တည့်
（１０）人通りが多い ひとどおりおおい လူဖြတ်သွားဖြတ်လာများခြင်း
（１１）近所付き合い きんじょつきあい အိမ်နီးနားချင်းရင်းနှင်းချစ်ခင်မှု
（１２）無料 むりょう အလကား
（１４）広々としている ひろびろとしている ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း
（１５）日当たりがいい ひあたりがいい နေရောင်အ၀င်ကောင်းမွန်သော(အိမ်ခန်း)
（１６）一軒家／一戸建て いっけんや／いっこだて လုံးချင်းအိမ်
（１７）物干し ものほし အ၀တ်လှန်းတန်း
（１８）風呂場 ふろば ရေချိူးခန်း
（１９）洗面場 せんめんじょう အ၀တ်လျှော်သည့်နေရာ
（２０）一人暮らしの家　ひとりぐらしのいえ တစ်ယောက်နေအိမ်
（２１）一人住まいの家 ひとりずまいのいえ တစ်ယောက်နေအိမ်
（２２）この辺り／この付近 このあたり／このふきん ဒီအနီးအနားတစ်ဝုိုက်
（２３）彼と付き合う かれとつきあう ကောင်လေးနဲ့လျှောက်လည်
（２４）友達に付き合う ともだちにつきあう သူငယ်ချင်းနဲ့အဖော်လုိုက်လျှောက်လည်
（２５） 真ん前 まんまえ ရှေ့တည့်တည့်
（２６）真後ろ まうしろ နောက်တည့်တည့်
（２７）真ん中 まんなか အလည်တည့်တည့်
（２８）引越しの荷造りをする ひっこしのにづくりをする အိမ်ပြောင်းရွေ့ရန်အထုတ်များထုတ်ပုိုးသည်။
（２９）斜め前 ななめまえ မျက်စောင်းထုိုး(နေရာ)
（３０）回覧板を回す かいらんばんをまわす လှည့်လည်အကြောင်းကြားသည်။
（６）段ボール箱 だんぼーるばこ=> စက္ကူကတ်ထူပုံး
（１０）パック => ပါကင်ပိတ်ထုတ် (အများအားဖြင့်ထုတ်ပုိုးရောင်းချသောစားသောက်ကုန်များ)
（１５）家電製品 かでんせいひん=> အိမ်သုံးပစ္စည်း
（１７）不用品を処分する ふようひんをしょぶんする=>မလိုအပ်သောအရာများကုို စွန့်ပစ်သည်။
（２０）生ゴミ なまごみ=> အစိမ်းအမှိုက်(သား။ငါး။အသီးအရွက်များမှထွက်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း)
（２３）指定ゴミ袋 していごみぶくろ=>သတ်မှတ်အမှိုက်အိတ်များ(ဂျပန်နိုင်ငံရှိတစ်ချိူ့သောရက်ကွက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော အမှိုက်အိတ်များဖြင့်သာ အမှိုက်ပစ်ခွင့်ရှိသည်)
（２５）ラベルをはがす=>အညွှန်းစာရွက်ကုို ခွာသည်(ရေဘူးမှ ကြော်ညာတံဆ်ိပ်)
（２)アルミ缶をつぶす あるみかんをつぶす=>သံဘူးကုို ခြေမွသည်။
（２８）古新聞を再利用する ふるしんぶんをさいりようする=>သတင်းစာ အဟောင်းများကုို ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
（３１）秘密がもれる ひみつがもれる=>လျိူ့ဝှက်ချက်က ပေါက်ကြားသည်။
（３２）秘密をもらす ひみつもらす=>လျိူ့ဝှက်ချက်ကုို ဖောက်ကြားသည်။
ပထမအပတ်ရဲ့အခန်း၂မှာလိုတာပုိုတာလေးComment မှာ ၀င်ဖြည့်သွားပေးနော်။မှားနေတာရှိရင်လည်း ပြောပြကြဦးနော်။
（２）つまらないものですが。。。＝＞မဆုိုစလောက်လေးဆုိုပေမယ့်(လက်ဆောင်ပေးရာတွင် မိမိပေးမည့်လက်ဆောင်ကုို နှိမ့်ချ၍ အစချီပြောဆုိုသည့်စကားလုံး )
အခန်း၃မှာ ပါတဲ့ KOTOBAတွေ လိုတာရှိရင် ကွန့်မန့်မှာ ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်..
အစအဆုံး ကွကုိုယ်ဘာသာပြန်လိုက် ရှာလိုက်နဲ့ ရေးပြီးတင်တာမုို့Typing အမှားလေးတွေ Imi အမှားလေးတွေရှိနုိုင်ပါတယ်.. လွဲနေတာလေးတွေရင်လည်း နံပါတ်နှင့်တကွပြောပြပြီး ပြင်ပေးခဲ့ပါဦးလို့… みなさん、よろしくね。
（２）食卓を片付ける（しょくたくをかたづける）＝＞　စားသောက်ပန်းကန်များကုို သိမ်းဆည်းသည်။
（４）子育てをする（こそだてをする）＝＞　ကလေးကုို ပြုစုပျိူးထောင်သည်။
（６）子供を甘やかす（こどもをあまやかす）＝＞　ကလေးကုို အလိုလုိုက်သည်။
（８）お尻をたたく（おしりをたたく）＝＞　တင်ပါးကို ရုိုက်သည်။
おんぶする＝おんぶう＝＞ ကလေးကုို ကုန်းပုိုးသည်။
（３０）いたずらをする＝＞　ပြောင်စပ်စပ်နုိုင်သော။ အကျီစယ်လွန်သောကလေး
ဒီနေ့အတွက်စကားလုံး . ကလေးကုိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့။
（１０）サングラスのあとがついている＝＞ နေကာမျက်မှန်ရာက ကျန်ရစ်သည်။
（１４）ロープをつかむ＝＞ ကြိုးကုို ဖမ်းဆွဲ(ဆုတ်)သည်။
（１８）棚をつる（たなをつる）＝＞ စင်ကုိုပြုလုပ်သည်။(အသေတပ်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ချိတ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသောစင်)
（２１）（～を）引っかける（ひっかける）＝＞ – ကိုချိတ်သည်။ငြိသည်။
（２８）船を岸に近づける（ふねをきしにちかづける）＝＞　လှေကုို ကမ်းကပ်သည်။
（２９）サメが近づく（さめがちかづく）＝＞　ငါးမန်းက အနီးနားရောက်လာသည်။
（３０）サメが近寄る（さめがちかよる）＝＞　ငါးမန်းက အနီးနားရောက်လာသည်။
（３１）あちこち＝あちらこちら＝＞　ဟုိုနေရာ ဒီနေရာ
ဒီနေ့အတွက်စကားလုံး. အသားအရေ နေလောင်ဒဏ်အလွန်အကျူးမခံရဖုို့ သတိထားကြရအောင်။
လိုနေပိုနေမှားနေတာလေးတွေရှိရင်လည်းဖြည့်စွက်ပေးပါ။ みなさん、今日もよろしくね。♥ ❤ ❤
（６）授業料を払い込む（じゅぎょうりょうをはらいこむ）＝＞　သင်တန်းကြေးကုို အွန်လုိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲပေးချေသည်။
（７）やちんを振り込む（やちんをふりこむ）＝＞　အိမ်လခကုို အွန်လုိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲပေးချေသည်။
（９）公共料金を支払う（こうきょうりょうきんをしはらう）＝＞　အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်(ရေ၊မီး၊ဂတ်စ်၊ဖုန်း)ကုို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ငွေလွှဲပေးချေသည်။
（１１）手数料がかかる（てすうりょうがかかる）＝＞ ၀န်ဆောင်ခ၊ဆောင်ရွက်ခ က ကုန်ကျသည်။
（２５）旅行をする余裕がない（りょこうをする余裕がない）＝＞ ခရီးသွားဖုို့ (ပုိုက်ဆံ)အပုိုမရှိ
（２６）むだを省く（むだをはぶく）＝＞　အသုံးအဖြုန်းကို ရပ်တန့်သည်။
（２７）収入につりあう生活（しゅうにゅうにつりあうせいかつ）＝＞ ၀င်ငွေနှင့်ကုိုက်ညီအောင် နေထုိုင်စားသောက်မှု
ယနေ့အတွက်စကားလုံး-၀င်ငွေနှင့်ကုိုက်ညီတဲ့ နေထုိုင်စားသောက်မှုပုံစံ ဖန်တီးကြရအောင်။
ဒီနေ့တော့ ပထမတစ်ပတ်စာ ပြီးပါပြီ။ လိုနေပုိုနေမှားနေတာလေးတွေ ၀င်ဖြည့်ပေးပါဦးနော်။　みなさん、今日もよろしく。
（１）老人ホームのホームヘルパー（ろうじんほーむのほーむへるぱー）＝＞　ဘုိုးဘွားရိပ်သာတွင် အကူအလုပ်လုပ်ကုိုင်သူ
（２）語学学校の講師（ごがくがっこうのこうし）＝＞　နိုင်ငံခြားဘာသာစကား သင်ဆရာ
（１７）正社員を募集する（せいしゃいんをぼしゅうする）＝＞　အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း အလိုရှိသည်။
（１８）派遣社員に登録する（はけんしゃいんにとうろくする）＝＞　အငှားဝန်ထမ်းအလုပ်ကုို စာရင်းသွင်းသည်။ (အလုပ်လျောက်)
（２１）面接で緊張する（めんせつできんちょうする）＝＞　အင်တာဗျူးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားသည်။
（２３）８時間勤務（８じかんきんむ）＝＞　အလုပ်ချိန် ၈နာရီ
（２４）時給で働く（じきゅうではたらく）＝＞　နာရီပုိုင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. အင်တာဗျူးသွားတဲ့အခါ သင့်လျော်တဲ့ အ၀တ်အစားဝတ်သွားကြရအောင်။
လိုတာပုိုတာလေးတွေဖြည့်ပေးပါဦး။ မြန်မာလိုပြန်ထားတာလေး တစ်မျိူးဖြစ်နေရင် လည်း ပြင်ပေးသွားပါဦးနော်။ みなさん、今日もよろしくお願いします。
（７）４月に入社する（４がつににゅうしゃする）＝＞　လေးလပုိုင်းတွင် ရုံးအလုပ်စလုပ်မည်။
（９）我が社の女子社員（わがしゃのじょししゃいん）＝＞　ကိုယ့်companyရဲ့ အမျိူးသမီးဝန်ထမ်းများ
（１０）先輩に教わる（せんぱいにおそわる）＝＞　စီနီယာဆီမှ အတွေ့ အကြုံများကုို လေ့လာသင်ယူ။
（１１）先輩に見習う（せんぱいにみならう）＝＞　စီနီယာဆီမှ အတုယူလေ့လာသင်ယူ။
（１７）席を外す（せきをはずす）＝＞　ထုိုင်ခုံနေရာမှ ထွက်သွားသည်။
（２０）仕事が生きがいだ（しごとがいきがいだ）＝＞　အလုပ်မှာ ပျော်တယ်။
（２１）有給休暇（ゆうきゅうきゅうか）＝＞　ခွင့်ပြုထားသော ခွင့်ရက်။(သတ်မှတ်ရက် အရေအတွက်မကျော်ပါက လစာမဖြတ်သောခွင့်ရက်)
（２３）体がもたない（からだがもたない）＝＞　ခန္ဓာကိုယ်က မခံနုိုင်တော့ဘူး။
（２７）仕事を怠ける（しごとをなまける）＝＞　အလုပ်တွင် အပါးခုို၊အချောင်ခုိုသည်။
（２８）仕事をサボる（しごとをさぼる）＝＞　အလုပ်တွင် အပါးခုို၊အချောင်ခုိုသည်။
（３１）仕事でミスをする（しごとでみすをする）＝＞　အလုပ်တွင် အမှားလုပ်သည်။
（３２）上司にゴマをする（じょうしにごまをする）＝＞　အထက်လူကြီးကုို ဖားသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. လုပ်ရကျိူးနပ်တဲ့ အလုပ်မျိူးရှာဖွေကြရအောင်.
လိုတာပုိုတာ မှားနေတာလေးတွေ ဖြည့်ပေးဦးနော်။ みなさん、今日もよろしくね。
（１）会議が長引く（かいぎがながびく）＝＞　အစည်းအဝေးမှာ ကြန့်ကြာ
（２）会議の準備をする（かいぎのじゅんびをする）＝＞　အစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်မှုကုို ပြုလုပ်သည်။
（３）ミーティングの準備をする（ミーティングのじゅんびをする）＝＞　အစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်မှုကုို ပြုလုပ်သည်။
（４）意見を述べる（いけんをのべる）＝＞　(ကုိုယ့်)အမြင်၊အကြံဥာဏ်ကုို တင်ပြသည်။
（５）意見をまとめる（いけんをまとめる）＝＞　အကြံဥာဏ်တွေ အမြင်တွေကုို စုစည်းသည်။
（６）意見を求める（いけんをもとめる）＝＞　အကြံဥာဏ်တွေ အမြင်တွေကုို တောင်းဆုိုသည်။
（７）具体的な案を出す（ ぐたいてきなあんをだす）＝＞　လက်တွေ့ဆန်သော အကြံဥာဏ်ထုတ်။
（９）アイデアを出す（アイデアをだす）＝＞　အကြံဥာဏ်ကုို ထုတ်။
（１０）結論が出る（けつろんがでる）＝＞　အဆုံးသတ်စကားကို ထုတ်ပြော(အစည်းဝေး နိဂုန်းချူပ်)
（１１）資料を配る（しりょうをくばる）＝＞　စာရွက်စာတမ်းများကုို လိုက်ဝေ၊ကမ်းသည်။
（１２）プリントを配る（ぷりんとをくばる）＝＞　လက်ကမ်းစာစောင်များကုို လိုက်ဝေ၊ကမ်းသည်။
（１６）仕事の打ち合わせをする（しごとのうちあわせをする）＝＞　အလုပ်အတွက် ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်သည်။
（１８）仕事を順調にこなす（しごとをじゅんちょうにこなす）＝＞　အလုပ်ကို အကျိူးရှိရှိလုပ်သည်။
（２６）本社に転勤になる（ほんしゃにてんきんになる）＝＞　ရုံးချူပ်ကုို အလုပ်ပြောင်းသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. နားလည်ရလွယ် ကုိုယ်အမြင်လေးတွေ တင်ပြကြရအောင်။
（３）パソコンを起動する／立ち上げる（パソコンをきどうする／たちあげる）＝＞　ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်သည်။(start)
（５）パソコンを再起動する（パソコンをさいきどうする）＝＞　ကွန်ပျူတာကုို အစကပြန်ဖွင့်သည်။(restart)
（６）次の画面を表示する（つぎのがめんをひょうじする）＝＞　နောက်တစ်မျက်နှာကုို ဖွင့်သည်။
（７）プロバイダーと契約する（プロバイダーとけいやくする）＝＞　Providerဖြင့် ချိတ်ဆက်သည်။
（８）インターネットに接続する（インターネットにせつぞくする）＝＞　အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သည်။
（１０）ネットにアクセスする＝＞　အင်တာနက်ကို သုံးသည်။
（１１）（＾が）つながる＝＞　.. ဆက်စပ်သည်။ချိတ်ဆက်သည်။
（１３）ホームページで情報を得る（ホームページでじょうほうをえる）＝＞　web browsersများတွင် အချက်အလက်များကုို ရှာဖွေသည်။
（１４）ダウロードを開始する（ダウロードをかいしする）＝＞　ဒေါင်းလုပ် စလုပ်သည်။
（１５）ソフト（ウエア）をインストールする＝＞　ဆော့ဝဲလ်ကို ထည့်သွင်းသည်။
（１６）スタートボタンをクリックする＝＞　start button ကုို နှိပ်သည်။
（１７）フリーズする＝＞　freeeze ဖြစ်သွားသည်။(ကွန်ပျူတာတွင် မည့်သည်နေရာကိုမှ နှိပ်မရတော့ခြင်းကုိုဆုိုလိုသည်)
（１８）パソコンのシステムを更新する（パソコンのシステムをこしんする）＝＞　ကွန်ပျူတာရှိsystem များကုို ပြင်ဆင်သည်။
（１９）便利な機能（べんりなきのう）＝＞　လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်(function)
（２１）アドレスを入力する（アドレスをにゅうりょくする）＝＞　မေးလိပ်စာကုို ထည့်သွင်းသည်။
（２２）アドレスを登録する（アドレスをとうろくする）＝＞　မေးလိပ်စာကုို စာရင်းသွင်းသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး .. ကွန်ပျူတာအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေကုို ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာထားကြရအောင်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာအသုံးအနှုံးတွေကုို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ တုိုက်ရုိုက်အသုံးပြုကြတော့ ဒီတစ်ခေါက်ဘာသာ ပြန်ရတာ နည်းနည်း လက်ပေါက်ကပ်တယ်. မှားနေတာလေးတွေရှိရင်လည်း ၀င်ပြင်သွားပေးနော်. みなさん、今日もよろしくお願いします。
（１）書類を作成する（しょるいをさくせいをする）＝＞　စာရွက်စာတမ်းများကုို ပြုလုပ်သည်။
（２）かなを漢字に変化する（かなをかんじにへんかする）＝＞　ခနကုို ခန်းဂျိပုံစံပြောင်းသည်။
（３）漢字を確定する（かんじをかくていする）＝＞　ခန်းဂျိကုို အတည်ပြုသည်။
（４）文字を削除する（もじをさくじょする）＝＞　စာလုံးကုို ဖျက်သည်။
（７）カーソル移動する（カーソルいどうする）＝＞　cursorကို ရွေ့သည်။
（８）範囲を選択する（はんいをせんたくする）＝＞　နေရာကို ရွေးချယ်သည်။
（９）目的の位置に合わせる（もくてきのいちにあわせる）＝＞　သတ်မှတ်ထားသောနေရာအနေအထားကုို ချိန်ညှိသည်။
（１０）文字を中央にそろえる（もじをちゅうおうにそろえる）＝＞　စာလုံးကုို အလယ်တွင်ထားသည်။
（１１）右に寄せる（みぎによせる）＝＞　ညာဘက်ကုို ညှိသည်။
（１５）図を挿入する（ずをそうにゅうする）＝＞　မြေပုံကုို ထည့်သွင်းသည်။
（１６）図を拡大する（ずをかくだいする）＝＞　မြေပုံကို ပုံကြီးချဲ့သည်။
（１７）図を縮小する（ずをしゅくしょうする）＝＞　မြေပုံကုို ချူံ့သည်။
（１８）内容を修正する（ないようをしゅうせいする）＝＞　အကြောင်းအရာကုို ပြင်ဆင်သည်။
（１９）文書を編集する（ぶんしょうをへんしゅうする）＝＞　စာပုိုဒ်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည်။
（２２）図形をコピーする（ずけいをこぴーする）＝＞　ပုံကို ကူးယူသည်။
（２３）切り取る／カットする（きりとる／かっとする）＝＞　cut လုပ်သည်။
（２７）画像を取り込む（がそうをとりこむ）＝＞　ဓာတ်ပုံကို ထည့်သွင်းသည်။
（２８）文書を保存する（ぶんしょをほぞんする）＝＞　စာပုိုဒ်ကုို သိမ်းဆည်းသည်။
（３０）ファイルを添付する（ファイルをてんぷする）＝＞　fileကုို attachလုပ်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး . ကြည့်ရလွယ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြုလုပ်ကြရအောင်။
ကွန်ပျူတာသမားတွေ အသုံးများတဲ့ စကားလုံးတွေပါ..　みなさん、今日もよろしくね。
（１）プリンターで印刷する（プリンターでいんさつする）＝＞　Printerဖြင့်print ထုတ်သည်။
（２）プリンターでプリントする＝＞　Printerဖြင့်print ထုတ်သည်။
（３）プリンターの用紙が切れる（プリンターのようしがきれる）＝＞　printထုတ်သည့် စာရွက်ကုန်သွားသည်။
（４）インク／トナーがなくなる＝＞　print ထုတ်သည့်မှင် ကုန်သွားသည်။
（５）印刷の範囲をしていする（いんさつのはんいをしていする）＝＞　printထုတ်မည့်နေရာသတ်မှတ်သည်(data များကုို စာရွက်ပေါ်တွင်)
（６）印刷の向きを確認する（いんさつのむきをかくにんする）＝＞　printထုတ်မည့်ဘက်ကုို အတည်ပြုသည်။
（７）余白を多くする（よはくをおおくする）＝＞　ဘေးနေရာလွတ်ကို များများ(အကွက်ကျယ်ကျယ်)ထားသည်။
（８）標準サイズの用紙（ひょうじゅんさいずのようし）＝＞　သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းအရွယ်အစား
（９）印刷がずれる（いんさつがずれる）＝＞　print ထုတ်မည့် နေရာကုိုရွေ့သည်။
（１１）表示を切り替える（ひょうじをきりかえる）＝＞ ပြပုံပြနည်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်။
（１２）データが消える（データがきえる）＝＞　data များပျောက်ကုန်သည်။
（１４）迷惑メール（めいわくメール）＝＞　spam (အမှိုက်။ဗိုင်းရပ်စ်)မေးလ်များ
（１５）受信を拒否する（じゅしんをきょひする）＝＞　မေးလ်များကုို ပယ်ချသည်။
（１７）（コンピューター）ウイルスに感染する（ウイルスにかんせんする）＝＞　ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်အကိုက်ခံရသည်။
（１８）新しいウイルスに対応する（あたらしウイルスにたいおうする）＝＞　ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကုို နှိမ်နှင်းသည်။
（１９）チャットを楽しむ（チャットをたのしむ）＝＞　အွန်လိုင်းတွင် ချက်တင်လုပ်ရသည်ကုို နှစ်သက်သည်။
（２０）コミュニケーションを楽しむ（コミュニケーションをたのしむ）＝＞ လူအများနှင့် ရင်းနှင်းဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
（２２）ネットオークション＝＞　Net cution
လိုတာပုိုတာလေးတွေ ဖြည့်ပေးပါဦး။ နက်ဖန်အဆင်ပြေရင် N2 grammer
လေးတွေ တင်ပေးပါ့မယ်။ နေ့စဉ်မဟုတ်ပေမယ့် အပတ်စဉ်တော့ ရအောင်တင်ပေးပါမယ်။ Reply မပြန်ဖြစ်ပေမယ့် comment လေးတွေကို သေချာလိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်လုို့ ❤ ❤ မျက်စိ။မျက်လုံး။
（２）部屋の中をのぞく（へやのなかをのぞく）＝＞　အခန်းထဲ ချောင်းကြည့်သည်။
（４）リンゴをかじる＝＞　ပန်းသီးကုို ကိုက်သည်။
（７）（頭：あたま）うなずく＝＞　(ခေါင်း) ငြိမ့်သည်။
（１８）水道の蛇口をひねる（すいどうのじゃぐちをひねる）＝＞　ရေပိုက်ခေါင်းကို လှည့်သည်။
（２０）みぞをまたぐ＝＞　ရေမြောင်းကုို ကျော်သည်။ခွသည်။
（２２）雪道ですべる（ゆきみちですべる）＝＞　နှင်းများပုံနေသော လမ်းတွင်ချော်လဲသည်။
（２６）壁にぶつかる（かべにぶつかる）＝＞　နံရံကို တုိုက်မိသည်။
（２７）壁にボールをぶつける（かべにボールをぶつける）＝＞　နံရံကုို ဘောလုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်သည်။
မှားနေတဲနေရာလေးတွေ ထောက်ပြတဲ့ sisတုို့ broတို့ ကျေးဇူးပါနော်။ 皆さん、今日もよろしくお願いします。
（１４）あきる＝＞　ငြီးငွေ့ သည်။
（３７）神にちかう（かみにちかう）＝＞　ဘုရားးတွင် သစ္စာပြုသည်။
（３８）仏をおがむ（おとけをおがむ）＝＞　ဘုရား(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား) ရှစ်ခုိုးသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. စိတ်ထဲမရှင်းတာရှိရင် နားလည်သည်အထိမေးကြရအောင်။
みなさん、一緒に頑張ろうね。今日もよろしく。အပတ်စဉ် ၈အထိရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ၆ခန်းရှိပါတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်ဝက်တောင်ကျိူးတော့မယ်နော်။
（２）偉いと思う（えらいとおもう）＝＞　လေးစားဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ထင်မိသည်။
（２１）「（私のことは）ほっといて」＝＞　ငါ့တစ်ယောက်တည်းနေခွင့်ပေးပါ။ (သို့) ငါ့ကုို ထားခဲ့ပါ။
（２２）仕事を任せる（しごとをまかせる）＝＞　အလုပ်တွင် တာဝန်ပေးသည်။
（３０）文句を言う（もんくをいう）＝＞　မကောင်းပြောသည်။ မကျေနပ်ချက်ကို ဖွင့်ပြောသည်။
（３５）いばる＝＞　ကိုယ့်ကုိုအထင်ကြီးအောင် ကြွားဝါပြောဆုိုသည်။(ကိုယ့်တွင်ရှိသည်အရာထက်အပိုပြောဆုို)
（４１）嫌な態度をとる（いやなたいどをとる）＝＞　မကောင်းတဲ့အကျင့်ကို ပြုမူသည်။
（４２）態度を改める（たいどをあらためる）＝＞　အပြုအမူ၊ အမူအရာကို ပြုပြင်သည်။
（４３）失敗を人のせいにする（しっぱいをひとのせいにする）＝＞ ကိုယ့်အမှားကို သူများဆီပုံချသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကို တာဝန်ပေးပါ။
（８）裸足（はだし）＝＞　ခြေဗလာ။(ဖိနပ်မစီးထားခြင်းကို ဆုိုလိုသည်)
（１０）つま先＝＞　ခြေချောင်းများ(ခြေမ။ခြေညိုး စသည်ဖြင့်)
（１２）早めに医者にかかる（はやめにいしゃにかかる）＝＞　စောစောစီးစီး ဆရာဝန်ဆီ ဆေးစစ်ဆေးခံသည်။
（１６）症状が治まる（しょうじょうがおさまる）＝＞　(ရောဂါ)အခြေအနေက တုိုးတတ်လာသည်။သက်သာလာသည်။
（１８）顔が真っ青だ（かおがまっさおだ）＝＞　မျက်နှာက ဖြူဖတ်ဖြူလျော်နဲ့။
（２０）吐き気がする（はきけがする）＝＞　အန်ချင်စိတ် ဖြစ်နေသည်။
（３０）痛みをこらえる（いたみをこらえる）＝＞　နာကျင်မှုကို သည်းခံသည်။
（３１）痛みをがまんする（いたみをがまんする）＝＞　နာကျင်မှုကုို သည်းခံသည်။
（３２）痛みに耐える（いたみにたえる）＝＞　နာကျင်မှုကုို သည်းခံသည်။
（３４）悲しみを耐える（かなしみをたえる）＝＞　၀မ်းနည်းမှုကုို သည်းခံသည်။
（３６）肌のつやがいい（はだがつやがいい）＝＞　အသားအရေက ချောမွေ့နေသော။
（４４）リハビリをする＝＞　ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုို လုပ်ဆောင်သည်။
（４５）リハビリを受ける（リハビリをうける）＝＞　ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို လုပ်ဆောင်သည်။
（４８）手術の傷あとが痛む（しゅじゅつのきずあとがいたむ）＝＞　ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သောအမာရွက်ကနေ နာကျင်လာသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. နေလို့ထုိုင်လို့မကောင်းရင် ဆရာဝန်ဆီမှာ ဆေးသွားစစ်ကြရအောင်နော်။
ဒီနေ့ အပတ်စဉ် သုံးပြီးပါပြီ။နာက်အပတ် တနင်္လာနေ့ကနေ အပတ်စဉ် လေး အပိုင်းတစ် ပြန်စပါမယ်နော်။မှားနေတာလေးတွေတွေ့ရင် ပြောပြပေးခဲ့ဦးနော်။ みなさん、今日もよろしくね。
（１）お金持ちが必ずしも幸福とは限らない。（おかねもちがかならずしもこうふくとはかぎらない）＝＞　ပိုက်ဆံချမ်းသာတုိုင်းလည်းသေချာပေါက် ပျော်ရွှင်မယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
（２）人間は必ず死ぬ（にんげんはかならずしぬ）＝＞　လူဆုိုတာ သေချာပေါက်သေမျိူးတွေ။
（９）どうも＝＞　ကျေးဇူး။ အတော်ကလေး။အရမ်းကို။
（１８）なるほど＝＞　ဟယ်ဟုတ်လား။ အမှန်ပဲလား။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. (စာ၊အလုပ်)အကုန်လုံးမှတ်မိဖုို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
みなさん、今日もよろしくね。မှားနေတာရှိရင်လည်း ၀င်ပြောပေးပါဦးလုို့။ ❤ ❤ ~သားပဲ။ ~သားပါ။
（２３）せめて＝＞　အနည်းဆုံးတော့။ တတ်နိုင်သလောက်တော့။
ယနေ့အတွက် စကားလုံး. နေ့တိုင်းနေ့တုိုင်း အနည်းဆုံးတော့ တစ်နာရီ စာလုပ်ကြရအောင်နော်။
（１）たびたび＝＞　မကြာခဏ။ ခဏခဏ။
（５）まごまご（する）＝＞　ယောင်လည်လည်။ ရစ်သီရစ်သီ။ ယောင်ပေပေ။
（９）ぴったり＝＞　တိတိကျကျ။ ကွက်စတိ။
（１３）ちらっと／ちらりと＝＞　ဖျက်ကနဲ။ အမှတ်တမဲ့။
（１７）ずらりと／ずらっと ＝＞　အစီအရီ။
（２０）客がどっと来る（きゃくがどっとくる）＝＞　customersတွေ ဒလဆက် ။ တစ်ပြိုက်နက်တည်း ရောက်လာတယ်။
（２１）どっと疲れる（どっとつかれる）＝＞　ရုတ်တရက်ကြီး ပင်ပန်းလာတယ်။
（２３）ひとりでに＝＞　သူ့ဘာသာသူ။ (ドアがひとりでにあく ＝＞တံခါးသူ့အလိုလိုပွင့်သွားတယ်）
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. အိမ်စာကို ခပ်သွက်သွက် လုပ်ကြရအောင်။
（１３）むしろ＝＞　より（むしろ）のほうが　〜ထက်〜က
（１６）次第に（しだいに）＝＞　နည်းနည်း နည်းနည်းချင်း။
（２０）めっきり＝＞　လုံးလုံး။ လုံးဝ။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. သိသိသာသာကုို ဂျပန်စာတော်လာတယ်နော်။
（１４）なにかと＝＞　တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနှင့်။ အမျိူးမျိူးနှင့်။
（１９）いっそう＝＞　အရင်ကထက်ပုိုမုို။ တဆင့်ပိုမုို။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. နောက်ဆုိုရင် ဘာမဆုိုပြောနိုင်လာအောင် လုပ်ကြရအောင်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ခန့်မှန်းရသလောက်တော့ အောင်လောက်တယ်မဟုတ်လား။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး . အချိန်တွေကုန်တာမြန်လိုက်တာနော်။
（２１）名作（めいさく）＝＞　လက်ရာမွန်။လက်ရောကောင်း။ ဂန္ဓဝင်မြောက်တဲ့စာပေ
အဖြေပြောပြတဲ့သူတွေအားလုံးကုို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ ပြန်edit လုပ်လိုက်ပါပြီ။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ပိုအာရုံစူးစုိုက်ပြီး စာကျက်ကြရအောင်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. စာပေလက်ရာကောင်းများကုို ဂျပန်လုို ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။
（９）名所（めいしょ）＝＞　လူသိများသော (သို့) နာမည်ကြီးသော နေရာများ။
（１０）手話（しゅわ）＝＞　လက်ဟန်ခြေဟန်ပြ ပြောသော ဘာသာစကား။
（２２）強化する（きょうかする）＝＞　သန်မာအောင်လုပ်သည်။ သန်မာစေသည်။
（２３）強力な（きょうりょくな）＝＞　အစွမ်းထက်သော။သန်မာသော။ (強力な接着剤＝＞ဆင်ကော်）
（２７）力強い（ちからづよい）＝＞　စိတ်အားပြင်းထန်သော။ အင်အားတောင့်တင်းသော။
（４）本店（ほんてん）＝＞　ပင်မရုံး။ 支店（してん）＝＞　ရုံးခွဲ။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး.. စာမေးပွဲအောင်မြင်ဖုို့ကုို ရည်မှန်းပြီးကြိုစားကြရအောင်။
（１）デジカメ ＝ デジタルカメラ＝＞　ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ။
（２）ラッシュ ＝＞ အလျင်စလို
（３）マスコミ ＝ マスコミュニケーション＝＞　မီဒီယာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆုိုင်သော
（４）テロ ＝ テロリズム＝＞　အကြမ်းဖက်
（８）イラスト ＝ イラストレーション＝＞　ရုပ်ပုံ
（９）アマ ＝ アマチュア＝＞　၀ါသနာရှင်
（１３）ゼミ ＝ ゼミナール＝＞　အခမ်းအနား။
（１４）ホーム ＝ プラットフォーム＝＞　(ရထား။ကား)ပလတ်ဖောင်း
（１５）ホイル ＝アルミホイル＝＞　အလူမီနီယမ် သတ္တုပါး
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. စာမေးပွဲမှာ အမှားကင်းပါစေ။
（５）サービス精神旺盛（サービスせいしんおうせい）＝＞　ဝန်ဆောင်မှု စိတ်ဓါတ် ပြည့်ဝသည်
（９）コース料理（コースりょうり）＝＞　ဈေးအတိအကျသတ်မှတ်ထားပြီး သုံးမျိူးနှင့်အထက်ပါဝင်သော ဟင်းလျာစားပွဲအတွဲလိုက် ကုိုဆုိုလိုသည်။
（１０）フルコース＝＞　ဈေးအတိအကျသတ်မှတ်ထားပြီး သုံးမျိူးနှင့်အထက်ပါဝင်သော ဟင်းလျာစားပွဲအတွဲလုိုက်ကုိုဆုိုလိုသည်။(အပေါ်တစ်ခုနှင့်မတူသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် ဟင်းလျာများအပြင် အပုိုဖြည့်စွက် အရံစားစရာဟင်းများပါ(ဟင်းချိူ။ကော်ဖီစသည်ဖြင့်) တည်ခင်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။)
（１２）ドライな性格（ドライなせいかく）＝＞　တည်ငြိမ်အေးစက်သော အကျင့်စရိုက် ၊မသက်ဆိုင်သလိုနေတတ်သော၊တစိမ်းဆန်သောစရိုက်။
（２１）ビジネスマン＝＞　စီးပွားရေးသမား（日本語では会社員のこと=ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆုိုလျှင် companyအလုပ်လုပ်ကြသူများကိုဆုိုလိုသည်）
（２２）ポイントカート＝＞　point card(ယမ်းတစ်ထောင်ဖုိုး ၀ယ်လျင် တချိူ့ဆုိုင်များတွင်point ၁၀ရသည်။ ယမ်း၁၀နှင့်ညီမျှသည်)
（２３）重要なポイント（じゅうようなポイント）＝＞　အရေးကြီးသော အမှတ်အသား
（２７）オーバーに話す（オーバーにはなす）＝＞　အပုိုလုပ်ပြော။ ပုိုကဲပြောဆုိုသည်။
（２８）日本人とドイツ人のハーフ＝＞　ဂျပန် ဂျာမဏီ ကပြား
（３０）ユニークな考え（ユニークなかんがえ）＝＞　ထူးခြားကွဲထွက်နေသော အတွေးအခေါ်
（３１）彼はこの分野のベテランだ。（かれはぶんやのベテランだ）＝＞　သူက ဒီနယ်ပယ်မှာဆုိုအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိတယ်။
（３３）トレーナーを着て運動する（トレーナーをきてうんどうする）＝＞　အားကစားဝတ်စုံ(ဇစ်ဆွဲလက်ရှည်အင်ကျီ+အားကစားဘောင်းဘီ)ကို トレーナーလို့ခေါ်ပါတယ်။
（３４）スポーツクラブのトレーナー＝＞　အားကစားခန်းမ ရှိ အားကစားနည်းပြဆရာ
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ခန့်မှန်းထားတဲ့ ငွေပမာဏထက် မကျော်မိအောင် သုံးကြရအောင်။
5,9,10ရယ် ဘာသာပြန်လေးပြောပြကြပါဦးနော်။ ဆုိုလိုရင်းသိပေမယ့် မြန်မာလို ဘယ်လိုလှအောင်ပြန်ရမှန်းမသိဘူး။
（２）合コン（ごうコン）＝＞　ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ ဖူးစာရှာဖွေကြသော ပါတီ။
（４）ゴールデンウィーク＝＞　Golden Week (ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၅လပိုင်းအစောပိုင်း စနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်သော ပိတ်ရက် သုံးရက် ပါဝင်သော အပတ်)
（５）Uターン＝＞　ကိုယ့်အိမ်ကနေထွက်သွားပြီး အချိန်များစွာ ကြာပြီးသည့်နောက် ပြန်ရောက်လာပြီး ပြန်လည်နေထုိုင်ခြင်းကုို ဆုိုလိုသည်။
（８）フリーサイズ＝＞　free-size ဆုိုဒ်အလွတ်။
（１０）パトカー＝＞　ပတ်တယောင်လှည့်နေသော ရဲကား။
（１１）コインランドリー＝＞　အကြွေစေ့သုံး အဝတ်လျှော်ဆိုင်
（１３）リサイクルショップ＝＞　ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော အဟောင်းရောင်းဆုိုင်
（１７）シルバーツート＝＞　အသက်ကြီးသူ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် မသန်စွမ်းများ။ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများ အတွက် အထူးသီးသန့်ခုံ။
スピーチコンテスト＝＞ စကားပြောစွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲ။
好きなタイプ＝＞　ငါကြိုက်တဲ့စတုိုင်(လူကို ရည်ညွှန်းသည်)
（２５）テンポ＝＞ (အရှိန်)　နှုန်း(tempo)
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. အလုပ်တာဝန်တွေကုို သေသေချာချာလုပ်နိုင်အောင် အစီအစဉ်တကျရေးဆွဲကြစုို့။
①ボールが道を転がる＝＞　ဘောလုံးက လမ်းပေါ်လိမ့်သွားသည်။
①パンをちぎって食べる＝＞　ပါမုန့်ကုို ဖဲ့စားသည်။
①紙を破る＝＞ စာရွက်ကုို ဖြဲသည်။
ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးလိုက်တာ…. စသည်ဖြင့် သုံးပါတယ်။)
①犬が怒ってうなる＝＞　ခွေးက ဒေါသထွက်ပြီး မာန်ဖီသည်။
①耳をふさぐ＝＞　နား ပိတ်ထားသည်။
カメラをぶらさげる＝＞　ကင်မရာကုို လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားသည်။
①猫が皿をなめる＝＞　ကြောင်က ပန်းကန်ကို လျက်သည်။
①あめをしゃぶる＝＞　သကြားလုံးကုို စုပ်သည်။
①予定をずらす＝＞　အစီအစဉ်ကုို ရွှေ့လုိုက်သည်။
①彼の言葉に傷ついた＝＞　သူ့ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရသည်။
（２４）改める（あらためる）＝＞　ထပ်မံ။တစ်ဖန်။ထပ်လောင်း။ သီးသန့်။သတ်သတ်။
①先に行われた会議＝＞　ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က အစည်းအဝေး
①真っ先に家帰る。＝＞　အရင်ဦးဆုံး အိမ်ပြန်သည်။
နေကောင်းရဲ့လား ? ဟင့်အင်း အိပ်ငုိုက်နေရုံသက်သက်ပါပဲ။
①上等な服＝＞　အရည်အသွေးကောင်းသော အ၀တ်အစား။
①高度な技術（こうどなぎじゅつ）＝＞　အရည်အသွေးမြင့်မားသော နည်းပညာ
①高価な品物＝＞　ဈေးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း
①勝手に行動するな＝＞　ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လျောက်မလုပ်နဲ့။
①無断で帰るな＝＞　ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မပြန်ရ။
①料理が次々に出てくる。＝＞　ဟင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု လာချတယ်။
①他人より余計に勉強する。＝＞　တစ်ခြားလူတွေထက် စာပုိုလုပ်တယ်။
①いつもより余分に食事を作る。＝＞　ပုံမှန်ထက် ပုိုပြီး ဟင်းပုိုချက်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး.အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ဆုို ကောင်းတဲ့ရလဒ်က ထွက်မှာပဲ။
①同僚のミスを責める＝＞　လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အမှားကုို အပြစ်တင်ပြောဆုိုသည်။
②相手のチームを攻める＝＞　တစ်ဖက်အသင်းကို တုိုက်ခုိုက်သည်။
（３）乗る（のる）＝＞　စီးသည်။ လက်ခံနာယူသည်။
①相談に乗る＝＞　အကြံဥာဏ် လက်ခံနာယူသည်။
①雑誌に記事が載る＝＞ ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းခံရတယ်(မိမိသတင်းပါလာတယ်)
（６）当たり（あたり）＝＞ – စီ
①これ以外に方法はない＝＞　ဒီဟာက လွဲပြီး တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူး။
①婦人服＝＞　အမျိူးသမီး အကျီ င်္
①弱い方に味方にする＝＞　အားနည်းသူဖက်က ရပ်တည်မယ်။
①大きな被害をもたらす＝＞　(တစ်ခုခုသော အကြောင်းရင်းကြောင့်) ကြီးမာတဲ့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
①この辞書は詳しい。＝＞　ဒီအဘိဓာန် က အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်တွေပါတယ်။
②負けてくやしい＝＞　ရှုံးလို့ ခံပြင်းတယ်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. အရှုံးမပေးဘဲ ရှေ့ဆက်သွားကြရအောင်။
နံပါတ်လေးရဲ့ တစ်ရဲ့ ဆီလျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး ပြောပြပေးပါဦးနော်
（４）賞味期限が切れる（しょうみきげんがきれる）＝＞　(အရသာရှိရှိစားသုံးနိုင်သည့်)သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်သွားသည်။
（７）野菜の水気を切る（やさいのみずけをきる）＝＞　ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေဆေးပြီး ရေစစ်သည်.
（１０）ハンドルを右に切る（ハンドルをみぎにきる）＝＞　လက်ကုိုင်(စတီယာတုိုင်)ကို ညာဘက်ကုို ကွေ့သည်။
（１１）カードをよく切る（カードをよくきる）＝＞　ကဒ်(ဖဲ)ကုို ချိူးသည်။
（１４）窓ガラスに水滴がつく（まどガラスにすいてきがつく）＝＞　ပြတင်းပေါက်မှန်တွင် ရေစက်များတင်နေသည်။
（２２）服においがつく（ふくにおいがつく）＝＞　အကျီ င်္မှာအနံစွဲသည်။
（２７）ボールが当たる（ボールがあたる）＝＞ ဘောလုံးကို ထိသည်။မှန်သည်။
（２８）ボールを当てる（ボールをあてる）＝＞　ဘောလုံးကုို ထိမှန်စေသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး.. နိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတတ်ဖုို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချုပြီးသွားပြီလား။
（３）太陽に雲がかかる（たいようにくもがかかる）＝＞　နေက တိမ်တွေနောက်ရောက်သွားတယ်။
（７）壁に絵をかける（かべにえをかける）＝＞　နံရတွင် ပန်းချီချိတ်သည်.
（１１）犬にブラシをかける（いぬにブラシをかける）＝＞　ခွေးကုို (ရေချိူးစဉ်)ဘရက်ခ်ျနှင့်တုိုက်သည်။
（１２）植木に水をかける（うえきにみずをかける）＝＞　ပျိူးပင်ကို ရေလောင်းသည်။
（１４）体重をかける（たいじゅうをかける）＝＞　ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထားသည်။「balance ယူတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။
လွန်ဆွဲတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အနောက်မှာထားသည်။
စကိတ်စီးတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခြေထောက်မှာထားသည်။
（１５）命をかけて、子供たちを守る（いのちをかけて、こどもたちをまもる）＝＞　အသက်ပေးပြီး ကလေးတွေကုို ကာကွယ်သည်.
အာမခံ ဝင်ထားတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ငွေပြန်ရတာကို ပြောတာ။
（１７）なべを火にかける（なべをひにかける）＝＞　ဒယ်အုိုးကို မီးအပူပေးသည်။
（２４）大事を取って入院する（だいじをとってにゅういんする）＝＞ (ရောဂါ)အခြေအနေမဆုိုးခင် ဆေးရုံတတ်သည်.
（３０）パジャマのズボンのゴムが伸びる（パジャマのズボンのガムがのびる）＝＞　ညအိပ်ဝတ်စုံရဲ့ဘောင်းဘီသားရေကြိုးက ရှည်ထွက်လာသည်။(သားရေကြိုး အားလျှော့လာခြင်း။)
（３１）そばが伸びて、まずくなる（そばがのびて、まずくなる）＝＞　ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေရှည်ထွက်လာပြီး စားမကောင်းတော့ဘူး။
（３２）肩まで髪を伸ばす（かたまでかみをのばす）＝＞　ဆံပင်က ပုခုံးအထိရှည်လာတယ်။
（３３）アンテナを伸ばす（アンテナをのばす）＝＞　အင်တာနာကုို ဆွဲထုတ်.ဆွဲဆန့်သည်။
（３４）アイロンをかけてしわを伸ばす（アイロンをかけてしわをのばす）＝＞　အတွန့်တွေကုို မီးပူတုိုက်ဖြန့်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အချိန်ယူကြရအောင်။
（３）台風の被害は軽かった。（たいふうのひがいはかるかった）＝＞　မုန်တုိုင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်း။
（４）台風の被害は大きかった。（たいふうのひがいはおおきかった）＝＞　မုန်တုိုင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ။
(9) the examination became light. (examination examination lightly)
(10) the examination became heavy. (examination စိတ်မသက်မသာဖြစ် ။)
(11) my son gotajob, and the burden of his parents was lighter. (the son ofason has been’salot of’s, and oh မိဘရဲ့0န်ထုတ်0န်ပုိုးက0န်ပုိုးက0န်ပုိုးက0န်ပုိုးက ။
(12) my son tookajob and the burden of his parents became heavy. (the son of the son has been’s and oh, and the lid ofasnack is,.
（１３）マッサージで体が軽くなる（マッサージでからだがかるくなる）＝＞　အနှိပ်နှယ်ခံလိုက်လို့ ကုိုယ်လက်ပေါ့ပါသွားတယ်။
(14) walk in the dark at night.
（１５）暗い色のシャツ（くらいいろのシャツ）＝＞ မှောင်သောအရောင်ရှိတဲ့ ရှပ်အကျီ င်္
（１６）明るいいろのシャツ（あかるいいろのシャツ）＝＞　လင်းသော အရောင်ရှိတဲ့ ရှပ်အကျီ င်္
(17)adark voice speaks inadark voice.
（１８）明るい声で話す（あかるいこえではなす）＝＞　ပျော်ရွှင်ကြည်ပြသော အသံဖြင့်ပြောသည်။
(19) the prospect of the future is dark (Branch only ။)
（２０）彼女には暗い過去がある。（かのじょにはかこがある）＝＞　သူမမှာ ဆုိုးရွားတဲ့အတိတ်ဆုိုးရှိတယ်။
(21) she hasabright past. (where there is a)=> ။ ။)
（２２）最近の学生は政治に暗い。（さいきんのがくせいはせいじにくらい）＝＞　အခုခတ်ကျောင်းသားတွေက နုိုင်ငံရေး ဗဟုသုတမရှိကြဘူး။
（２２）最近の学生は政治に明るい。（さいきんのがくせいはせいじに明るい）＝＞　အခုခတ်ကျောင်းသားတွေက နုိုင်ငံရေး ဗဟုသုတကြွယ်ဝကြတယ်။
(24) the art of the arts is highly interested in the arts.
(25) the art of the arts is low to the art of the arts.
(26) the ideal is high.
(28) the nose is high = Pride. (‘ ‘-000000င့်ကြွားသည် ။ ။000000
(29) Pride (29)
(30) High-Level Hotels (of hotel)=> အဆင့်မြင့်ဟုိုတယ်)
（３１）ベルトがきつい＝＞　ခါးပတ်က အရမ်းကြပ်လွန်း
（３２）ベルトがゆるい＝＞　ခါးပတ်က အရမ်းချောင်လွန်း
（３３）きつい（＝つらい／きびしい）けいこ＝＞ စည်းကမ်းတင်းကျပ်လွန်းတဲ့ လေ့ကျင့်ရေး။
（３４）早起きはきつい（はやおきはきつい）＝＞　စောစောထရတာ ခက်ခဲပင်ပန်း။
(36) ” tight ” (severe), ” strict ” (harsh).
(37) the itinerary of this trip is tight “I can afford it” it’s hard to do this => ခရီးစဉ် ကြပ်သည် ။
(38) my wife is tight ” = ” strong ” character. (it’s hard to getahard time.)
（３９）びんのふたがきつくてあかない＝＞　ရေဘူးအဖုံးက ကျပ်လွန်းလို့ဖွင့်မရဘူး.
（４０）びんのふたがゆるい＝＞　ရေဘူးအဖုံးက ချောင်တယ်။
(41) the sun is tight today ‘ = STRONG ‘ (today’s kanzashi are tight) – “strong”
(42) tight ” strong ” sake (tight ” strong ” Salmon).
（４４）目つきがきつい（めつきがきつい）＝＞　အကြည့်က စူးရှသည်။တင်းမာခက်ထန်သည်။
(45) the mouth is light.
(47) ” Light ” = ” easy ” and ” easy ” and ” easy ”
A word for today. Let’s lighten the burden of the parents.
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. မိဘ၀န်ထုတ်ဝန်ပုိုးတွေ လျော့ချပစ်ကြရအောင်။
①非常識な（ひじょうしきな）＝＞ common sense (အမြင်)မရှိသော။
③名演奏（めいえんそう）＝＞　နာမည်ကြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု။
①各クラス（かくクラス）＝＞　အတန်းတိုင်း အတန်းတုိုင်း။
①故田中社長（こたなかしゃちょう）＝＞　ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော တနခသူဌေး
②故田中大臣（こたなかだいじん）＝＞　ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော တနခ ၀န်ကြီး
④拝観料（はいかんりょう）＝＞　၀င်ကြေး။( sightseeing .ပြတုိုက်စသည်ဖြင့်)
③修理代（しゅうりだい）＝＞　ပြင်ဆင်စရိတ် ကျသင့်ငွေ။
①借り賃（かりちん）＝＞　ငှားရမ်းသည်။(သူ့ ဆီက)
②予算内に収まる（よさんあいにおさまる）＝＞　ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်(အတောအတွင်း) နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်.
③期限内に支払う（きげんないにしはらう）＝＞　နောက်ဆုံးနေ့မတုိုင်ခင်(အတောအတွင်း) ပေးသွင်းသည်။
①予想外の結果（よそうがいのけっか）＝＞　ထင်မထားမိတဲ့ ရလဒ်
②範囲外の問題（はんいがいのもんだい）＝＞ ဘောင်အပြင်က(မသက်ဆုိုင်သော) ပြသနာ။
③日常的な出来事（にちじょうてきなできもの）＝＞　နေ့စဉ် နေ့တုိုင်း လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရာ
④進歩的な考え（しんぽてきなかんがえ）＝＞　တုိုးတတ်ဖုို့အလားအလားရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်
②開放感を味わう（かいほうかんをあじわう）＝＞　လွတ်လပ်တဲ့အရသာကုို ခံစား
③存在感がある人（そんざいかんがあるひと）＝＞　သူ့ရဲ့ ဖြစ်တည်ချက်ကို(ရှိနေသလို)ခံစားရစေတဲ့သူ
①安全性を確かめる（あんぜんせいをたしかめる）＝＞　လုံခြုံစိတ်ချရစေရန် သေချာအောင်လုပ်သည်။
②可能性を試す（かのうせいをためす）＝＞　ဖြစ်နိုင်ချေကုို စမ်းကြည့်သည်။
②ステール製の机（ステールせいのつくえ）＝＞　စတီးဖြင့်ပြုလုပ်သည့် စားပွဲ
②見た目が悪い（みためかわるい）＝＞ ပုံပန်းသွင်ပြင်က ကြည့်ရဆုိုး
②西洋風の建物（せいようふうのたてもの）＝＞　အနောက်တုိုင်းပုံစံပေါက်သည့် အဆောက်အဦး
③関西風の味付け（かんさいふうのあじつけ）＝＞　ခန်းစိုင်ပုံစံ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်
遅くなっちゃってゴメンなさい。နံပါတ်ရှစ်ရဲ့ တစ်နဲ့နှစ်လေးဘာသာပြန်လေး ပြောပြပေးပါဦးနော်။ တခြားနေရာတွေ မှားနေရင်လည်း ကူညီပြီး သင်ပြပေးပါလို့။
②りんごを皮ごと食べる（りんごをかわごとたべる）＝＞　ပန်းသီးကုိုအခွံမခွာဘဲစား။
③ケースごと宝石が盗まれた（ケースごとほうせきがぬすまれた）＝＞　ရတနာဘူး လိုက်အခုိုးရသည်။
①一雨ごとに暖かくなる（ひとあめごとにあたたかくなる）＝＞　မုိုးရွာတဲ့အချိန်တုိုင်း နွေးလာတယ်။
②ちらしを家ごとに配る（ちらしをいえごとにくばる）＝＞　လက်ကမ်းစာစောင်ကို အိမ်တုိုင်းကို လုိုက်ဝေသည်။
③失敗するごとに「＝たびに」上達する（しっぱいするごとにじょうたつする）＝＞　ရှုံးနိမ့်မှုတွေ ကြုံတွေ့လာရတုိုင်း ပုိုမုိုတော်လာသည်။
①バスが５分おきに来る（バスが５ふんおきにくる）＝＞　ကားက ငါးမိနစ်ကြားတစ်ခါလာသည်။
①仕事ぶり（しごとぶり）＝＞　အလုပ်လုပ်ပုံ လုပ်နည်း
②話ぶり（はなしぶり）＝＞　စကားပြောပုံ ပြောနည်း
④彼と５年ぶりに会った（かれと５ねんぶりにあった）＝＞　သူနဲ့ ငါးနှစ်အကြာမှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။
①忘れがたい思い出（わすれがたいおもいで）＝＞　မေ့ဖုို့ခက်တဲ့ အမှတ်တရများ
②その要求は認めがたい（そのようきゅうはみとめがたい）＝＞　အဲ့ဒါတောင်းဆို်မှုက လက်ခံဖုို့ခက်ခဲ။
③信じがたい事件（しんじがたいじけん）＝＞　လက်ခံဖုို့ခက်ခဲတဲ့ ကိစ
①このペンは書きづらい（このペンはかきづらい）＝＞　ဒီဘောပင်က ရေးလို့မကောင်းဘူး
②歩きづらい道（あるきづらいみち）＝＞　လမ်းလျှောက်ရခက်တဲ့ လမ်း
①言葉づかいが悪い（ことばづかいがわるい）＝＞　စကားပြောပုံဆုိုပုံ ရိုင်းစုိုင်းသော။
③人づかいが荒い（ひとづかいがあらい）＝＞　လူကုို အရမ်းခုိုင်းတယ်။
①パソコンを使いこなす（パソコンをつかいこなす）＝＞　ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်
②洋服を着こなす（ようふくをきこなす）＝＞　အ၀တ်အစားကို စမတ်ကျအောင်ဝတ်
④一泊二食付き（いっぱくにしょくつき）＝＞　ထမင်းနှစ်နပ်အပါ အခန်း(ဟိုတယ်။တည်းခုိုခန်း)
①炊き立てのごはん（たきたてのごはん）＝＞　ကျက်ခါစ ထမင်း
②焼きたてのパン（やきたてのパン）＝＞　ဖုတ်ပြီးကာစ ပါမုန့်
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ရုိုင်းရုိုင်းစုိုင်းစုိုင်းစကားလုံးတွေကုို သတိထားကြရအောင်။
（２１）持ち上げる（もちあげる）＝＞　မတင်သည်။ မသည်။
①電車賃を立て替える。＝＞　ရထားခ စုိုက်ပေးသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ကွန်ပျူတာ ကို်ယ်တွယ်မှုကုို သတိထားပြီး သုံးကြရအောင်။
①駅を乗り過ごす＝＞　ရထားမှတ်တုိုင် ကျော်စီးသွားသည်။
①電車に乗り遅れる。＝＞　ရထားစီးဖို့ နောက်ကျ(မမှီ)သွားသည်။
①自分に当てはめて考える。＝＞　ကို်ယ့်ကိစ္စအနေနဲ့ စဉ်းစား
（２１）書き込む（かきこむ）＝＞ (note)　ရေးမှတ်သည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတုိုင်ခင် ရီပို့ (အိမ်စာ)ပြီးအောင်လုပ်ရအောင်။
သူဂျပန်စာ တတ်တာ အရမ်းမြန်တယ်။ မျက်စိရှေ့မှာတင် တော်တော်လေးတော်လာတယ်။
လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ ကလေးဆုိုတာ လွှတ်ထားလုို့ကုိုမရဘူး။
ကျောင်းသားတွေရဲ့အိမ်စာ တွေကုို အကြမ်းဖျင်းစစ်။
မိဘတွေမသိအောင် ကစားဖုို့။လည်ဖို့ ခုိုးထွက်။
အားနည်းချက်ကုို အပြောခံလုိုက်ရလို့ နားမခံသာဖြစ်။
အရောင်းဝန်ထမ်းတွေက စကားပြောကောင်းလို့ သတိထားကြရအောင်။
သူက နှုတ်လုံတော့ ယုံကြည်လုို့ရတယ်။
သူက အပေါက် ဆုိုးပေမယ့် သဘောကောင်းတယ်။
ငါက အဲ့ဒီဆုိုင်မှာဆုိုရင် မျက်နှာပွင့်တယ်။
သူက အသိမိတ်ဆွေများတော့ မေးကြည့်ရအောင်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. အရေးကြီးတဲ့ ပစည်း တွေကို မျက်စိရှေ့မြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာ ထားကြရအောင်။
①もんだいにてをつける。＝＞　ပြသနာဖြေရှင်းဖို့ကို စတင်တယ်။
①いま、てがはなせません。／てがふさがっています。＝＞　အခု အရမ်းအလုပ်များနေတယ်။
①こんなびょうき、いしゃのてにかかればすぐなおる。＝＞　ဒီရောဂါက ဆရာဝန်နဲ့သွားပြရင် ချက်ချင်းပျောက်မှာ။
①はがいたくてべんきょうがてにつかない。＝＞　သွားနာနေလို့ စာကုို အာရုံစိုက်လို့မရဘူး။
①これはすこしてをいれれば、つかえます。＝＞ ဒီဟာက ပြင်လုိုက်ရင်တော့ သုံးလို့ရပါတယ်။
①私はかれとはきがあわない。＝＞ ကျွန်တော်နဲ့သူ အဆင်မပြေဘူး။
①あしたしけんだから、きがおもい。＝＞　မနက်ဖြန်စာမေးပွဲမုို့လို့ စိတ်တွေလေးနေတယ်။
①きがきいたじょうだんをいう。＝＞　အကျိူးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဟာသ။ပြက်လုံးထုတ်။
①むすこのことがきにかかる。＝＞　သားအကြောင်းကို စိတ်ထဲကနေမထွက်ဘူး။(သားအကြောင်းချည်းပဲ စဉ်းစားနေမိ)
①あいつのたいどがきにくわない。（＝きにいらない）＝＞　သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကုို သဘောမကျဘူး။
①じょうしにきをつかう。＝＞　သူဌေးသဘောကျအောင် ကြိုးစားပြသည်။
①いま、あまいものをたべるきがしない。＝＞　အခု ချိူတဲ့အစားအစာစားချင်စိတ်မရှိဘူး။
①こんなことをいいましたが、きをわるくしないでください。＝＞ ငါအဲ့လိုပြောလုိုက်တယ်ဆုိုပေမယ့် အဆုိုးဘက်ချည်းပဲ မခံစားပါနဲ့။ (ငါပြောလိုက်တာကုို စိတ်ထဲမထားပါနဲ့)
①ゴルフのうでがあがった。＝＞　ဂေါ့ဖ်ရုိုက်တာ ကျွမ်းလာတယ်။
①きょうとまであしをのばそう。＝＞　ကျိူတုိုထိ ခြေဆန့်သွားကြအောင်။(ခရီးဆက်သွားကြရအောင်)
①あしがないので、いけない。＝＞　ငါ့အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိလို့ မသွားဘူး။
①じっさいにあしをはこんで、しなものをたしかめる。＝＞　တကယ်ဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကုို သေချာအောင်စစ်ဆေးသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ပင်ပန်းနေပြီဆုိုရင် ခဏလောက်ထားကြရအောင်။
ကျွန်တော် ဂျပန်အရက်တော့ မသောက်နုိုင်ပေးမယ့် ဘီယာကတော့ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘောနပ်က ယမ်းငါးသောင်းလည်းပဲ မပေးတာထက်စာရင် တော်ပါသေးတယ်။
①最近ろくな仕事がない＝＞　အခုတလော အလုပ်ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။
①妻はろくに料理を作らない。＝＞　အမျိူးသမီး(မိန်းမ)က ထမင်းကောင်းကောင်းမချက်တတ်ဘူး။
①彼の実力は大したものだ。＝＞　သူက အရမ်းတော်တာပဲ။
②大したものがありませんが、どうぞ召し上がってください。＝＞　ပြောရလောက်တဲ့စားစရာတော့မဟုတ်ပေမယ့် သုံးဆောင်ပါဦး။
（１０）あっという間に（あっというまに）＝＞　အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ( သတိမထားမိလိုက်တဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ)
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. စာမေးပွဲအောင်ရင်တော့အရမ်းကောင်းတဲ့အရာပဲ။
တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အရာကို တခြားသူကုိုပြောပြသည်။
တနခစံရဲ့ အိမ်နဲ့ ကိုယ့်အိမ် အပြန်အလှန် အသွားအလာလုပ်သည်။
⑻上げ下げする（あげさげする）＝＞　မြောက်လိုက် ချလိုက်လုပ်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဟာလေး မိတ္တူဆွဲပေးပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဒီမဂ္ဂဇင်းလေး ယူပေးပါလား။
②この曲はノリがいい。＝＞　ဒီသံစဉ်က အရမ်းမြူးတယ်။
①人のアイデアをパクる＝＞ တခြားလူရဲ့ အတွေးကို ခိုးချသည်။
ယနေ့အတွက်စကားလုံး. ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန် အပြန်အလှန်ကူညီကြမယ်။